Dacwada Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo maanta ka furmeysa magaalada Hague – Radio Muqdisho
Dacwada Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo maanta ka furmeysa magaalada Hague
Dacwada badda ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu wadaa in ay maanta ka furanto magaalada Hague ee dalka Holland.
Qareeno iyo sidoo kale aqoonyahano ku xeeldheer arimaha badda ayaa gaaray magaalada Hogue ee dalka Holland.
waxaa sidoo kale shalay gaaray Madax ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay xeer ilaaliyaha Qaranka Axmed Cali Daahir.
Dacwada oo maanta bilaabaneysa ayaa lagu wadaa in lasoo gaba gabeeyo 23-ka bishan oo ku began maalinta Jimcaha ah ee nagu soo wajahan.
Kenya ayaa isku dayday in ay ishortaag ku sameyso dacwadaan oo ay gudbisay dowladda Soomaaliya, waxaana dowladda Soomaaliya ay horey u sheegtay in aaney ka tanaasuli doonin dacwada Badda ee ay gudbisay.
Madaxweyne Xasan oo ka tacsiyeeyay geerida marxuum Jeneraal Goobaale